शरीर बेचेर पास हुन्छन भन्नेलाइ कारवाहिको माग , सबैले पढौ - info4nepal
शरीर बेचेर पास हुन्छन भन्नेलाइ कारवाहिको माग , सबैले पढौ
शरीर बेच्दै पढेको झुटो आरोप लगाउनेलाइ कारवाहिको माग , सक्दो शेयर गरौ
बङ्ग्लादेशमा रहेका मेडिकल बिध्यार्थिले प्रेस बिज्ञप्ति निकालेका छन ।
दुर्गा प्रसाइले बङ्ग्लादेशमा रहेका नेपाली छात्राहरुलाइ त्याहाका प्रोफेसरहरुले करणी गरेर राखेका छन भनेर झुटो आरोपले सबै उनिप्रती आक्रोशित छन।
सबै नेपाली छात्राहरु जो बङ्लादेशमा पढिरहेका छन उनिहरुले आफ्नो मान हानी गरेको आरोप लगाएका छन । हुदै नभएको झुटो कुरा बोलेर दुर्गा प्रसाइले आफ्नो व्यापारको लागि जे पनि बोले अब तेस्को कारवाही सरकारले गर्न पर्छ ।
हेर्नुहोस कस्तो छ अभिव्यक्ती – तल नेपालिमा अनुबाद सहित
“दुर्गा प्रसाइको अभिव्यक्तिले हामिलाइ चित्त दुखाएको छ र हाम्रो व्यक्तित्वोमाथी गलत प्रश्न खडा गरेका छन। बङ्ग्लादेशबाट डाक्टर पढेर आउन ६ वर्स लाग्छ र सबै सहजै पास नहुदा केही समय बढी लाग्छ ।तर येस्लाइ , करणी भएर बस्छन भनेर दुर्गा प्रसाइले हाम्रो व्यक्तित्व माथी लात हानेका छन।
हामी मात्र हैन हाम्रा अभिभावकको पनि मर्मलाइ दुख्ने गरि दुर्गा प्रसाइले बोलेका छन। येस्तो केही सबुत बिना आरोप लगाउनु अपराध हो । ”
आखिर पैसा नै रहेछ सबै कुरा , पैसाको लागि जे पनि बोल्ने यी मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाईं । बङ्गलादेशमा पढन भनी जाने केटिहरु यौन धन्दा जस्तो करणी भएर बस्छन भनेर झुटो आरोप लगाउने यि दुर्गा प्रसाइलाइ आज समाजले थुक्दै छ ।
डा. गोबिन्द केसि जस्तो महान मान्छेलाइ रुवाउने र जनता लुटने यो दुर्गा प्रसाइको सबैले बिरोध गरौ ।
बंलादेश डाक्टर पढ्न गएका छोरिहरुको आमा बा को मन कति रुदो हो; यो कुरो सुनेपछि।
झापाका B & C अस्पतालका संचालक भन्छन बंलादेशमा पढ्न गएका छात्राहरुलाई करणी गरेर राखेका छन त्याँहीका प्रोफेसरहरु…
यो भिडियो बङालादेस सम्म पुर्याउ अनि कुटनैतिक मर्यादा उलंघन गरेको बारे बङलादेस ले जे गर्नु छ आफै गर्छ, मार्सी साउ लाई।
जसले जे बोले पनि हुन्छ क्या हो हाम्रो देशमा? आफ्नो medical college ko affiliation लाई justify गर्न कति हद् सम्म गिर्न सकेका होलान यि व्यक्ति ? यिनका छोरी-चेली छैनन होला? यसरी अर्काको छोरी-चेली माथि यस्तो भद्दा लाञ्छना लगाउन पाईन्छ ?
बङगालादेशमा डा. पडेर फर्केका छोरी,चेली हरुको इज्जत काहा पुर्यो यो मान्छेले, यो भिडियो हेरेर यो सरकारले यसलाइ तुरुन्त मान हानिको मुद्दा चलाउनु पर्छ र यसलाई कानुन को दायरामा राख्नु पर्छ, अति बोल्न थालिसक्यो अब।
शरीर बेचेर बंगलादेशमा एमबिबिएस पास गर्छन नेपाली छात्राहरुले : कानुनमन्त्रि तामाङ
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा एमबिबिएस उत्तीर्णको प्रमाणपत्र लिन नेपाली छात्राहरुले शरिर नै बिक्री गर्नु पर्ने बताएका छन् । मन्त्री तामाङले हालै एक विद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘बंगलादेशमा कोही पनि नेपाली छात्राहरु एमबिबिएस गर्न जान्छन् भने पास गरेको सर्टिफिकेट लिन कहिँ न कहिँ उनीहरुले आफूलाई बेच्नै पर्छ ।
हामी आफ्ना चेलीहरुलाई पढ्न विदेश पठाउँछौं, तर उनीहरुले आफ्नो शरिर सुम्पिनु परिरहेकोछ । यो कथा कति मार्मिक छ ? आफैं बुझौं ।’
मन्त्री तामाङको भाषण ओटिभी नेपाल नामक युट्युब च्यानलले शनिबार अपलोड गरेको छ । एक विद्यालयका छात्रछात्राहरुलाई शुभकामना दिन आयोजना गरिएको जस्तो देखिने कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले यस्तो विवादास्पद धारणा राखेका हुन् ।
आफूले सुनेको तर साँचो कथा भन्दै उनले यो विषय बाहिर ल्याएका छन् ।
यस्तै अभिव्यक्ति झापा बिर्तामोडका मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईले पनि केही दिन अघि सार्वजनिक गरेका थिए ।
बंगलादेश पढ्न गएका नेपाली चेलीहरुलाई चोट पुगेको बताउदै एशोसिएशनका अध्यक्ष नविन यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यस्ता अभिव्यक्तिले बंगलादेशमा अध्ययनरत हजारौं चेलीहरुलाई चोट परेको छ, वास्तविकता नबुझि मनगढन्ते तरिकाले आएका प्रसाईका अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति प्रटक गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण गर्दै सरकार समक्ष कारबाहीको लागि जोडदार माग गर्दछौं।’
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, झापा स्थित बिएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले मिडियामा बंगलादेशमा पढ्न गएका र पढेर आएका नेपाली चेली विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिको बिरोध गर्दछौं।
नेपाली मेडिकल स्टुडेन्ट एशोसिएशन बंगलादेशले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरि बिएमसी सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले तथ्यहिन कुराहरु बोलेको भन्दै कारबाही गर्न सरकार समक्ष माग गरेको हो।
प्रसाईले समाजिक सञ्जालमा भिडियो जारी गरि सार्वजनिक रुपमा बंगलादेशमा डाक्टर पढ्न गएका नेपाली केटीहरु ९ वर्षसम्म बस्ने र त्यहाँ उनीहरुको प्रोफेसरहरुबाट अस्मिता लुटिने विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।
परालको लट्ठिबाट डा गोबिन्द केसि डराउदैनन
कुनै पनि विषयमा सामान्य अध्ययनसमेत नगरी टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति नेपाली समाजको एउटा कमजोरी हो । आफूलाई फरक ठान्ने एउटा दल (विवेशील साझा पार्टी) ले पनि डा.केसीको अनसन र पछिल्लो समय उनको मागलाई विगतका सरकारले गरेका सम्वोधन र सोही अनुसार भएका सुधारलाई चट्टै विर्सिएर विज्ञप्ति मार्फत कांग्रेसप्रति हल्ला टिप्पणी गर्‍यो ।
डा.केसीका मागका विषयमा नेपाली कांग्रेसको विगत र वर्तमानको भूमिकाका विषयमा विनाअध्ययन तथ्यलाई नै गोलमटोल गर्ने गरी एउटा नयाँ राजनीतिक दलले प्रश्न गर्न थालेपछि केही विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने देखियो ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले विगतदेखि नै उठाएका माग र त्यसको सम्वोधनका विषयमा अहिले बहसमा छ । डा.केसी नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र स्वास्थ्य सेवालाई आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ पटक-पटक अनसन बस्दै आएका छन् । अहिले पनि उनी अनसनको तेस्रो हप्तामा छन् ।
उनको स्वास्थ्य निकै नाजुक भएको छ । तर, पनि डा.केसीको माग पूरा गर्नेतर्फ सरकारको चेत खुलेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले डा.केसीको मागलाई समर्थन गर्दै सदन अवरोध गर्दै आएको छ । डा.केसीका पक्षमा सडक प्रदर्शनदेखि समग्र पार्टीपक्ति क्रियाशील छ । कांग्रेसले डा.केसीको माग सही हो र त्यसले मुलुकको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भन्ने मान्यता अंगीकार गरेको छ ।
डा.केसीको पहिलो अनसनको माग के थियो ?
डा.गोविन्द केसीको पहिलो अनसनको पहिलो माग नै नेपालमा मेडिकल शिक्षाका विषयमा नयाँ नीति बनाऊ भन्ने हो ।
नेपालको मेडिकल शिक्षाको ट्रेन्ड सेवाभन्दा पनि व्यापारतर्फ अघि बढेको भन्ने डा.केसीको धारणा थियो । त्यसै धारणाका आधारमा डा.केसीले मेडिकल शिक्षामा नयाँ नीति ल्याऊ भन्ने मूल माग राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राई हुँदा थालेका हुन् ।
छैठौं अनसनमा आइपुग्दा पहिलो पटक सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र त्यसका सभापति सुशील कोइराला थिए ।
त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालाले डा.केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षाका विषयमा अध्ययन गर्न त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा.केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका हुन् । डा.केसीले जे भने, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यही गर्‍यो ।
त्यसपछि ६ महिना लगाएर कोइराला प्रधानमन्त्री नै हुँदा उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदन बुझाएको केही समयपछि कोइरालाको सरकार विस्थापित गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । अनि माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर भनेर फेरि डा.केसी अनसन बसे ।
केपी ओलीले पनि सहमति गरे । तर, कार्यान्वयन गरेनन् । फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । फेरि केसी अनसन बसे । एउटा सहमति भयो, केही माग कार्यान्वयन भए अधिकांश भएनन् ।
अनि प्रधानमन्त्री बने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । त्यतिवेला पनि डा.केसी अनसन बसे । उनको माग थियो, सुशील कोइरालाले कार्यदल बनाएर तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।
अनसनको तेस्रो हप्तामा डा.केसीसँग सहमति भयो । र, सोही अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गराउन माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल संसद नभएकाले अध्यादेश जारी भयो ।
डा.केसीले जे जे माग गरे, त्यो आम जनताको माग हो भन्ने ठान्यो र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कार्यन्वयनमा अघि बढायो । अनि कहाँनेर कांग्रेस पानीमाथिको ओभानो भएको छ ?
डा.केसीको अहिलेको मुख्य माग यसअघि देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश हुनुपर्‍यो भन्ने हो । विवेक भएका दलहरुले भन्नुपर्‍यो, अनि कहाँनिर अहिले डा.केसीका मागमा कांग्रेसले राजनीति गर्‍यो ? साझा विवेक प्रयोग गरेर त हेर्नुस् ? डा.केसी र तपाईहरुको दलले पनि अहिले भनेको नै माथेमा प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा विधेयक पेश गर भनेको होइन र ?
त्यो माथेमा कार्यदल कसले बनायो ? माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा संसद नभएका अवस्थामा अध्यादेश कसले ल्यायो ? भनेपछि नेपालको मेडिकल शिक्षा सुधार गर्न कांग्रेस प्रतिवद्ध छ कि तपाईहरु ?
सूचना प्रविधिको विकास र जनता सचेत भएको अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि विषय लामो समय ढाँट्न सकिँदैन ? एकदिने राजनीति गर्न छोड्नुहोस् । तथ्यलाई बङगाएर राजनीति हुँदैन, त्यो त भोलि तपाईहरुलाई नै लाजनीति हुन्छ ।
त्यसैले डा.केसीको माग र नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विषयमा कांग्रेसमात्रै एक्लो दल हो विगतदेखि नै लड्ने । चुनावको मुखमा खुलेका दलको परालको लठ्ठीबाट कांग्रेस डराउँदैन र डराउनु पनि पर्दैन ।
डा.केसीको मागमा के गर्‍यो कांग्रेसले ?
डा.केसीले भने अनुसार एमबीबीएस अध्ययनका लागि लाग्ने शुल्क घटाउने निर्णय तत्कालीन कांग्रेस सभापति कोइरालाकै पालामा भएको हो । उहाँले नै डा.केसीको अनसनलाई सम्वोधन गर्दै एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३२ लाखभन्दा बढी रकम लिन नपाउने व्यवस्था लागु गर्नुभएको हो ।
त्यसअघि कम्तिमा ६० लाख रुपैयाँ शुल्क एमबीबीएस अध्ययन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुले लिँदै आएका थिए । कोइरालाले नै त्यसलगत्तै डा.केसीको मागअनुसार उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए ।
२०७१ पुसमा गठन भएको माथेमा कार्यदलले २०७२ असार १४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई मत्रिपरिषदबाट स्वीकार गरेर कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले नै एमबीबीएस अध्ययनका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा, विदेश पढ्न जाँदा पनि परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरेको हो ।
त्यसका साथै एमबीबीएसको १५० सिटलाई १०० मा झार्ने काम पनि त्यतिबेलै सुशील कोइरालाकै सरकारले गरेको हो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा देउवाले ८ महिनाअघि माथेमा प्रतिवेदनलाई अध्यादेशमा समेटेर जारी गरेका थिए । अहिले पनि डा.केसीले माथेमा प्रतिवेदनमा जे-जे भनिएको छ, त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाउँ भनेका हुन् ।
सरकारले विधेयक बनाएको छ । त्यसमा माथेमा प्रतिवेदनको मूल स्पिरिट समावेश हुनुपर्‍यो, अर्थात देउवा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार नै विधेयक तयार गर्नुपर्‍यो भन्ने माग डा. केसीको अहिलेको अनसनको हो ।
हाम्रो समाजमा धेरै सुधारको खाँचो छ । राजनीति आफैंभित्र धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रमा त्यस्तै बेथिति छ । सेना, प्रहरी, नागरिक समाज कुनै पनि अंगलाई हेरेर सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।
तसर्थ, मुलुकमा एउटा थिति बसालेर लोकतन्त्रलाई मजवुत बनाउने सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हामी आफै‌ंबाट सुधार गरेर समाज सुधार गर्नुपर्छ । तर, एक दिन पनि नटिक्ने कुरा गर्न बन्द गरौं । समन्यायको सिद्धान्तका आधारमा यो देशका सबैले ‘मेरो देश’ भनेर गर्व गर्ने गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न अघि बढौं ।
सत्ता त कहिले आउँछ, कहिले जान्छ ? आउँदा अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारजस्तै मात्तिने र जाँदा आत्तिने हो भने त्यो राजनीतिक दल नै होइन । तसर्थ, जिम्मेवार राजनीतिक दल बनौं । विवेकशील बनौं, विवेकहीन नबनौ ।
(लेखक चिकित्सा अध्यादेश जारी गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस सल्लाहकार थिए)
जुन देशमा नारि रास्ट्रपती छिन तेहि देशमा आज नेपाली डाक्टर पढ्ने चेलिको चरित्र हत्या गरियो
जुन देशमा नारि रास्ट्रपती छिन तेहि देशमा आज नेपाली डाक्टर पढ्ने चेलिको चरित्र हत्या गरियो तर पनि कोहि छैनन सजाए दिने किनकी नालायक सरकार नै येस्ता मान्छेहरुको पक्ष लिएर बसेको छ ।
घुसिया र माफियालाइ सहयोग गरेर बसेको छ । कानुनमन्तृले नेपाली चेलिहरु बङ्गलादेशमा गएर शरीर बेचेर डाक्टर बन्ने गरेको भनेर सबुत बिना आरोप लगाएका छन अनि अर्को माफिया साउ जो पैसाको सिरानिमा निदाउन एक सच्चा नेपाली डाक्टर गोबिन्द केसिलाइ मार्न तम्सेको छ, उसले पनि मिडियामा बोल्यो कि नेपाली केटिहरु बङ्गलादेशमा आफ्नो शरीर बेचेर चिकित्सक बनेर आउछन ।
थुक्क कानु बनाउने तिमिहरु पाखन्डिहरु । तेस्तो स्थानमा पुगेर के बोल्नु पर्छ के बोल्नु पर्दैन पनि थाहा छैन त चोर हरुलाइ ।
रास्ट्रपती विध्या देवि ज्युको पनि आज इज्जत गयो किनकी जुन देशमा नारि रास्ट्रपती छिन तेहि देशमा आज नेपाली डाक्टर पढ्ने चेलिको चरित्र हत्या गरियो ।
दुर्गा प्रसाइले पनि बि.एन्ड.सि मेडिकल कलेजका छात्रालाइ करणी गर्छन : कारण हेर्नुस
दुर्गा प्रसाइले के बोलेका येस्तो ?
तेसो त , जे पनि भन्न मिल्ने भए , दुर्गा प्रसाइले पनि आफ्नो कलेजको छात्रालाइ करणी गरेर राखेका छन । हामी सबैले भन्न मिल्छ ।
उनले हुँदै नभाको कुरालाइ मिडियामा बोल्न मिल्छ? कति चित्त दुख्छ अरुलाइ? ? आफ्नो व्यापार बढाउन जे पनि भन्ने येस्ता मान्छेलाइ केपि ओलिको साथ किन छ आखिर ? प्रधानमन्त्री ज्यु को येहि हो त हैसियत ?
माथि दिइएको भिडियो बङालादेस सम्म पुर्याउ अनि कुटनैतिक मर्यादा उलंघन गरेको बारे बङलादेस ले जे गर्नु छ आफै गर्छ, मार्सी साउ लाई।
PLEASE SHARE THIS TO ALL
प्लास्टिकको १० को नोटको मूल्य लाखौ आउने, तपाइसङ्ग छ भने पढिहल्नुस लाखौ कमाइहाल्नुस
ranjan July 9, 2018
नाग नागिन देवताको प्रेम कथा , कसरी उत्पती भए हेर्नुस पूरा जानकारी, एक लाइक अबस्य
चेलीको पक्षमा न्यायको आवाज उठाउदा मारिएका खुनालाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर अन्त्येष्टि
ranjan August 26, 2018
फेरि आयो खुसिको खबर , बन्ने भयो अशोकको नया घर – हेर्नुहोस भिडियो सहित (शेयर)
नेपाली सेनाको पहिलो महिला प्रधानसेनापति हुने बाटो मेजर सुलोचना पौडेल !